Medeshi: SOMALILAND: Waxa aanu Leenahay Dastuur iyo Madax aanu Dooranay
Urrurada Qurbajoogta Somaliland - Bayaanka August 2012 -DATE: 27 AUGUST 2012 Somaliland: Waxa aanu leenahay Dastuur iyo Madax aanu Dooranay
Read in English language :
Somaliland : To the people of Somalia- We have our country, our people & our constitution
Anagoo u rajaynayna in dadka Somalia ay helaan nabadda iyo xasilloonida ilaa hadda ay raadinayaan, waxaanuse ku guubaabineynaa iyaga iyo beesha caalamka in ay ku qancaan oo ixitiraamaan go'aanka aan ka noqoshada lahayn ee ay ummadda Somaliland kula soo noqdeen madax- banaanidoodii May 1991kii. Waxaanu si cod qayaxan, marlabaad iyo saddexaadba, ku leenahey, “waxaanu nahay dad dastuurkoodii, dawlad iyo golayaal la soo doortayba leh, waxba isuguma keen jiraane intiinu – hadaad dadka Somalia tihiin – haydinku fillaato oo ilaahay haydiin barakeeyo: kala quusanee aan kala qomomo la’aano”.
Nasiibdarose, haddana markale, tubtii loogu samaynaayay Somalia Dastuur cusub iyo xulashadii (doorasho ma jirto sidii markii hore la sadaalinayay) xubnaha golaha sharcidajinta Somalia waxa lagu saleeyay qaacidadii lagu dafiri jiray jiritaanka qaranimada Somaliland iyo in ay jiraan madax matala ummadda reer Soomaliland oo si xor oo xalaala ummaddaasi u dooratay inay danaheeda matalaan. Waxaana la soo jiitay dad la yidi waa ka mid qabiilkii la macmalay. Ahmiyaddan la siiyey xubno qabiil matala waxay keentey ku dhawaaqidda dawlad gobolo been been ah oo dibadaha lagaga dhawaaqay oo xita sheegta carooyin ka mid ah Somaliland iyo Puntland. Isku-deyga in loo kala daadiyo Qaranka Somaliland gobollo qabaa’ila ma soo celineyso isu-taggii Somaliland iyo Somalia, waaney saameyneysaa gobolada Somalia sida hadaba ka muuqataa dawladahan yar yar ee meelo badan lagaga dhawaaqey. Somaliland waligeedna qayb kama ahayn samayntii dastuurka cusub ee Somalia, ama xulashada xubnaha baarlamaanka cusub ee la leeyahay waxa loo samaynayaa Somalia, amaba dawladda laga dhisayo Xamar. Aqlabiyad madax dhaqameedada dhabta ah ee Somaliland waxay ku kulmeen Hargeysa iyo Ceerigaaboba halkaas ooy ku cambaareeyeen ganafkana ku dhufteen martiqaadkii loo fidiyey. Markaas, dhowr qof oo iyagu iskood isu magacaabay, Xamarna isgeeyay oo dabadeedna magacaabey dad iyana badankoodu ka yimid qurbaha kama dhigi karaan in Somaliland ka qayb qaadatay arimahan Somalia, kamana dhigi karto Dastuurka Somalia wax ka socon kara si xalaal oo sharci ah dalka Somaliland. Guracnaanta waxa Xamar ka socda ee ku waajahan Somaliland waxa ay sii adkaysey uun ra’yiga ay qabaan dadka Somaliland oo ah Somalia waxa ay wali ku hamiyaysaa in ay Somaliland Muqdishu (Xamar) ka xukunto. Arrintani waxa ay kaloo shaki weyn gelineysaa mustaqbalka wadahadalladii Somaliland iyo Somalia ee lix bilood ka hor Shirkii London lagu heshiiyey in ay bilaabmaan. Waxeyna khatar aan horey u jirin gelineysaa xaaladda nabaddeed iyo xasilloonidda aan taamka aheyn ee ka jirta mandaqadda Geeska Afrika haddi dawladda cusub ee Somalia bilowdo faragelinta arrimaha Somaliland.
1. Unugga Daryeelka ka Somaliland.
• “Dadka Somalia” (Somalians) – waxaa loola jeeda dadka kasoo jeeda Somalia, wadan ahaan. • “Jamhuuriyadda (Diimoqraadiga ee) Somaliyeed” waxa loola jeedaa dawladii lagu sameeyey isu-taggii Somalia iyo Somaliland ee jirey 1960 ilaa 1991. Kalmadda “Diimoqraadiga waxa lagu darey afganbigii miltariga ahaa ee lagu ridey xukuumadii diimuraadiga aheyd oo dabadeedna la dhisey kalitalis, magcana laga soo xigtey wadamadii Jarmalka Bari, Kuuriyada Waqooyi, Fiitanaamka Waqooyi …